Ukwethulwa kwe-Translate Science - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu Ithimba Lokuhumusha Isayensi on I-6th Meyi 2021 I-6th Meyi 2021
Siyajabula ukuba yingxenye ye- Humusha Isayensi ithimba, kanye namalungu avela enhlanganweni ye-Open Science kanye ne-Whose Knowledge. Ngalobu budlelwano, i-AfricArXiv izofaka isandla ekukhuthazeni ukwehluka kwezilimi zase-Afrika ekuxhumaneni kwabafundi
Lesi simemezelo sashicilelwa ekuqaleni e blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Amalungu eqembu anemvelaphi nezisusa ezahlukahlukene. Isazi samanzi UDasapta Irawan bangathanda ukuthi ososayensi bakwazi ukubhala ngolimi lwabantu ababasebenzelayo. UBen Trettel isebenza ngokuhlukaniswa kwezindiza zamanzi ezinesiphithiphithi nokuzisola ngokuthi ukuqonda okuningi okuvela ezincwadini zeziyaluyalu zaseRussia akunakwa. UVictor Venema isebenza ngezindlela ezibonwayo zesimo sezulu futhi idinga ulwazi ngezindlela (zomlando) zokulinganisa, ezigcinwa ngezilimi zendawo; Insimu yakhe idinga ukuqonda imithelela yesimo sezulu kuyo yonke indawo kanye nemininingwane yekhwalithi evela kuwo wonke amazwe omhlaba. ULuke Okelo, uJohanssen Obanda noJo Havemann basebenza ne- I-AfricArxiv - ingosi evuleleka yomphakathi evulelekile yokukhuthaza ukukhishwa kocwaningo lwase-Afrika. Banentshisekelo yokubona izincwadi zesayensi ngezilimi zase-Afrika zeqa imigoqo yokushicilela yezifundiswa yendabuko izilimi zomdabu eza nazo futhi kungekudala zizokwethula umzamo wokubambisana wokuhumushela imibhalo yesandla yase-Afrika yezilimi ezilimini ezahlukahlukene zase-Afrika.
Eqenjini leli gama “Izincwadi zesayensi” inezinhlobo eziningi zamafomu futhi ingasho noma yini kusuka kuma-athikili, imibiko nezincwadi, kuya kwizifushaniso, izihloko, amagama angukhiye namagama. Ukufingqwa kwezinye izilimi nakho kuyasiza.
Sinesifiso semisebenzi eminingi yokusiza ukuhumusha: ukuhlinzeka ngolwazi, ukuxhumana, ukuklama nokwakha amathuluzi nokunxenxa ukubona ukuhumusha njengokukhipha okubalulekile kocwaningo.
Sinayo le bhulogi, iWiki yethu, yethu uhlu lokusabalalisa futhi i-akhawunti emincane yokubhuloga ukuthola izingxoxo zokuthi yini esingayenza ukukhuthaza ukuhumusha nokunikeza imininingwane yokuthi singahumusha kanjani futhi sithole esevele akhona.
Amathuluzi ahlukahlukene (nemiphakathi ewasebenzisayo) angasiza ekutholeni nasekukhiqizeni ukuhumusha. I-database enezindatshana ezihunyushiwe ingenza zitholakale ngokwengeziwe. Le database kufanele igcwaliswe ngabantu nezikhungo ezenze ukuhumusha, kanye ne imininingwane yolwandulela kanye nama-athikili avela kumajenali wokuhumusha (kusukela esikhathini seCold War). Ngabaphathi bezinkomba ezifanele (i-APIs), amaphephabhuku kanye nezinqolobane zangaphambi kokuphrinta nezinhlelo zokubuyekeza kontanga kungavele kubonise ukuthi ukuhumusha kuyatholakala. I-database enjalo ingasiza futhi ekwakheni amasethi wedatha angasetshenziswa ukuqeqesha izindlela zokufunda zemishini zokuhumusha izilimi ezincane ezinamadijithi.
Kukhona okuhle Amathuluzi Okwe ukuhumusha okuhlanganyelwe kwe-interface ye-software. Amathuluzi afanayo ezindatshana zesayensi angasiza kakhulu: ukuhumusha i-athikili kahle kudinga ulwazi lwezilimi ezimbili nesihloko; le nhlanganisela kulula ukuyifinyelela neqembu futhi ukuhumusha ndawonye kumnandi kakhulu. Ukuhumusha okuzenzakalelayo kunganikeza okusalungiswa kokuqala futhi kulondoloze umsebenzi omningi.
Uma singanquma ukuthi iziphi izindatshana ezibaluleke kakhulu ukuhunyushwa ezingakhuphula izinkuthazo zezisekelo zesizwe (zikazwelonke) zokuxhasa ukuhumusha kwazo. Ngokusetshenziswa kwefayela le- izilimi eziningi Wikidata ulwazi singase thuthukisa ukusesha izincwadi nge amathuluzi wezilimi eziningi, ukuze futhi izindatshana ezifanele kwezinye izilimi ziyatholakala. Ngaphezu kwalokho singenza ukuthi ukumbiwa kwemibhalo kukhulunywe ngezilimi eziningi nezikhulumi ezingezona ezomdabu izincazelo ngolimi lwabo lwebele ngamagama anzima.
Kunokuba zaziwe, ngezinye izikhathi ukuhumusha kuholela nasekujezisweni. I-Google ijezisa abantu ngephutha ngokuhumusha amagama angukhiye ngoba isoftware yabo ibona lokho njengogaxekile kwamagama asemqoka, ngenkathi izindatshana ezihunyushiwe zivame ukubonwa njengokukopela. Sidinga ukukhuluma ngezinkinga ezinjalo futhi siguqule amathuluzi nemithetho enjalo ukuze ososayensi abahumusha izindatshana zabo bavuzwe.
IsiNgisi njengolimi oluvamile senze ukuxhumana komhlaba wonke ngaphakathi kwesayensi kube lula. Kodwa-ke, lokhu sekwenze kwaba nzima ukuxhumana nemiphakathi engeyona eyesiNgisi. Kwabakhuluma isingisi kulula ukubona ukuthi bangaki abantu abakhuluma isiNgisi ngoba ikakhulu sisebenzelana nabantu bakwamanye amazwe abakhuluma isiNgisi. Kucatshangwa ukuthi cishe abantu abayizigidi eziyinkulungwane bakhuluma isiNgisi. Lokho kusho ukuthi abantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa abakwenzi lokho. Isibonelo, ezinkampanini eziningi zesimo sezulu eGlobal South bambalwa kuphela abantu abasazi kahle isiNgisi, kepha basebenzisa imibiko yokuholwa ehunyushiwe yeWorld Meteorological Organisation (WMO) kakhulu. Kwi-WMO, njengenhlangano yobulungu bezinsizakalo zezulu, lapho yonke insizakalo yesimo sezulu inevoti elilodwa, ukuhumusha yonke imibiko yayo yesiqondiso ngezilimi eziningi kuyinto ephambili.
Izikhulumi ezingezona isiNgisi noma izilimi eziningi, kuwo womabili amazwekazi ase-Afrika (nakwamanye amazwe), zingabamba iqhaza kwezesayensi ngokulingana ngokuba nohlelo oluthembekile lapho umsebenzi wesayensi obhalwe ngolimi olungelona olwamukela khona uhunyushelwa esiNgisini (noma kunoma iyiphi enye language) futhi okuphambene nalokho. Imigoqo yolimi akufanele ichithe ithalente lesayensi.
Izindatshana ezihunyushiwe zesayensi zivula isayensi kubantu abavamile, abathanda isayensi, izishoshovu, abeluleki, abaqeqeshi, abaxhumanisi, abakhi bezakhiwo, odokotela, izintatheli, abahleli, abaphathi, ochwepheshe nososayensi. Isithiyo esiphansi kangako ekubambeni iqhaza kwezesayensi sibaluleke kakhulu ezihlokweni ezifana nokuguquka kwesimo sezulu, imvelo, ezolimo kanye nezempilo. Ukudluliswa kolwazi okulula kuhamba ngazo zombili izindlela: abantu abazuzayo kulwazi lwesayensi kanye nabantu abanolwazi ososayensi okufanele bazi. Ukuhumusha ngaleyo ndlela kusiza isayensi nomphakathi. Zisiza emisha futhi zibhekane nezinselelo ezinkulu zomhlaba emkhakheni wokuguquka kwesimo sezulu, ezolimo kanye nezempilo.
Izindatshana ezihunyushiwe zesayensi zisheshisa inqubekela phambili yesayensi ngokuthepha kulwazi oluningi nokugwema ukusebenza okubili. Ngaleyo ndlela bathuthukisa ikhwalithi nokusebenza kahle kwesayensi. Ukuhumusha kungathuthuka ukudalulwa komphakathi, ukuzibandakanya kwezesayensi kanye nokufunda ngesayensi. Ukukhiqizwa kwama-athikili wesayensi ahumushiwe futhi kudala idathasethi yokuqeqesha yokuthuthukisa ukuhumusha okuzenzakalelayo, okusasele ezilimini eziningi.
Njengoba ufundile kuze kube manje unentshisekelo ekuhumusheni nakwisayensi. Hlanganyela nathi. Sibhalele noma kunini: sinezingcingo ezi-2 zamasonto onke futhi uhlu lwamakheli. Shiya amazwana ngezansi. Faka ulwazi lwakho nemibono ku iWiki yethu. Bhala okuthunyelwe kwebhulogi ukuqala ingxoxo. Joyina nathi kuma-social media or engeza le bhulogi kumfundi wakho we-RSS. Sabalalisa umlayezo wokuthi i-Translate Science ikhona kunoma ngubani ongaba nentshisekelo nayo.
Ishicilelwe ekuqaleni blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Categories:	izimemezeloUkubambisanaUkuhluka KwezilimiEzokuxhumana Kwesayensi
Tags: Humusha IsayensiukuhumushaObani Ulwazi